Igbo, John: Lesson 003 - Ihe kachasị mkpa na okwu nke okwu tupu ejupụta (Jọn 1:1-5) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 003 (The word before incarnation)
2 Onye ahu na Chineke diri na mbu. 3 Ekère ihe nile site n'aka-Ya. E nweghị ihe ọ bụla e mere ka ọ bụrụ na ọ bụghị ya. 4 Nime Ya ka ndu diri, ndu ahu buru kwa Ìhè nke madu.
Kraist adigh ndu nye onwe ya, kama mgbe nile nye Chineke. O kewapughi ya na Nna ya, ma a na-eduzi ya mgbe niile, na-ebi na ya, ma na-anọgide na ya. Nzuko a nke Kraist "n'ebe Nna ya di" bu ihe di nkpa nye onye ozioma John bu na oghaghariri nka dika nmalite ozioma ya. Udo nke a di n'otu n'etiti Kraist na Nna ya bu ihe omuma nke Atọ n'Ime Otu. Anyị ekwenyeghị na chi atọ nwere onwe anyị, nkewapụrụ onwe anyị, mana anyị kwenyere n'otu Chineke, jupụtara n'ịhụnanya. Ugbu a, Onye ahu ebigh-ebi adighi ndu na nzuzo, ma Okpara ya nọnyeere ya mgbe nile, ya na ya biri n'udo zuru oke. Oburu na madu enwegh ihu ihu Chineke n'anya site na nmuta nke Mo Nso nime obi ya, ogagagh enwe ike ihu eziokwu nke ihe di mkpa nke Chineke. Ịhụnanya Chineke bụ ihe na-eme ka Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'otu dị ka otu Chineke.
Mgbe Chineke kere ụwa na mmalite, ọ bụghị naanị nke a ka ọ na-eme nke ọma, kama o mere ka ọ dịrị site n'Okwu ya. Ebe ọ bụ na Kraịst bụ Okwu nke Chineke, ụwa sitere n'aka ya. Nka putara na Kraist abugh nani onye nzoputa na onye ngbachite anya na onye ngbaputa, ma obu onye okike. Ebe ọ bụ na ọ dịghị ihe ọ bụla na-enweghị Kraịst mgbe ọ mere ya, ọ bụ onye pụrụ ime ihe nile. Ebe ọ bụ na ọ dịghị ihe na-eme n'enweghị ya na-eme ya, ọ na-achịkwa ihe niile. Oh, obi nke ga-enwe ike ịghọta ma ghọta onye Kraịst bụ! Ihe omumu sayensi nke oge a na ihe omumu nile na aru ndi ozo bu ihe di iche ma obu nkowa di ebube nke ebube nke Kraist na ike ya. Olu gị, uru gị, ọdịdị ahụ gị na obi gị na ihe karịrị nke ahụ bụ onyinye nile nke Kraịst nye gị. Ya mere olee mgbe ị na-ekele ya?
E kere ihe niile, ma e wezụga Chineke, Okwu ya na Mmụọ ya. Ọ dị n'ime onwe ya dị ndụ, ebighi ebi na nsọ. Dika Chineke nwere ndu n'ime onwe ya, ot'odi otua Kraist bu isi iyi nke ndu di ndu, bu onye kwesiri ntukwasi obi, onye neme ka ayi si n'onwu ikpe mara na nmehie, ma tinye ayi nime ndu ebighebi ya. Ndụ Chineke nke a nime Kraịst meriri ọnwụ; Ọ hapụrụ ili site n'ike nke ndụ ya. Kraist abughi nani Onye Okike, kama ya onwe ya bu isi iyi ndu. Ebe ọ bụ na ọ dị nsọ, ọ gaghị anwụ ma ọlị. Ọ dịghị mmehie ọ bụla nwere ike ịhụ na Chineke ma ọ bụ na Ọkpara ya, ya mere ọ dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Anyị na-ahụ echiche banyere ndụ Kraịst ugboro ugboro n'isiakwụkwọ nke ozioma nke John. Ndụ a bụ otu n'ime ntọala nke ụkpụrụ ya.Ìhè nke anyanwụ na-enye ndụ n'ụwa anyị. Mana dika Kraist, ihe di iche bu eziokwu: ndu ​​ya bu ihe ngbaba anya na nbili nke ayi nwere site na ya neme ka ayi nwe olile anya. Okpukpe anyị abụghị okpukpe nke iwu ọnwụ na ikpe, mana ozi nke ndụ na ìhè na olileanya. Nbilite n'onwu nke Kraist si na ndi nwuru anwu wezuga obi iru ala nile. Ebe obibi nke Mmụọ Nsọ n'ime anyị mere ka anyị soro na ndụ nke Chineke.
Ụwa gbara ọchịchịrị n'ihi mmehie, ma Kraịst bụ ịhụnanya na ìhè. Ọ dịghị ọchịchịrị, ọ dịghị njọ, ọ dịghịkwa ihe ọjọọ ọ bụla n'ime ya. N'ihi nke a, Kraịst jupụtara n'ebube. Ọ na-enwu karịa ìhè. Ot'odi, Jọn onye nkwusa ozioma abugh site na ikwuputa ebube nke ebube nke Kraist, kama obu isi ike ya na ndu ya. Maka ihe omuma banyere idi nso nke Kraist negosiputa ayi, n'ekpe ayi, ma kpochapu ayi, ma ihe omuma banyere ndu ya na eme ka ayi di ndu. Ịtụgharị uche na Kraịst na-akasi anyị obi ma na-enye anyị ume.Jizọs bụ ìhè nke ihe a kpọrọ mmadụ. Ọ dịghị enwu onwe ya ma ọ dịghị ebuli aha ya elu. Kama, ọ na-enwu n'ihi anyị. Anyị abụghị isi iyi nke ìhè, kama isi mmalite nke ọchịchịrị. Mmadu nile bu ihe ojoo, mana Kraist na-acho anyi uzo ka anyi wee mata ya ma mata ọnọdụ anyi. Site n'Oziọma ya, anyị na-ebili na ndị nwụrụ anwụ wee banye ndụ ebighi ebi. Kraịst na-adọta anyị ma na-akpọ anyị site na ìhè nke ndụ ya ịhapụ ọnọdụ anyị siri ike. Anyị na-eji obi ike na ntụkwasị obi bịakwute ya.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, anyị na-akpọrọ gị isi n'ihi na gị na Nna na Mmụọ Nsọ bụ otu. I kere ụwa n'ikwekọ na Nna. I nyere m ndụ. Na-agbaghara m ọchịchịrị niile na ndụ m ma mee ka m ghọta site na Mmụọ Nsọ gị ka m wee dịrị ndụ ma hapụ n'abalị nke mmehie m ma bịaruo ìhè nke ndụ ebighị ebi gị.
Gịnị bụ àgwà isii nke Kraịst nke John gosipụtara ná mmalite nke ozioma ya?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:28 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)